You are here: Home Home “Dhallinta ka qayb-geli talada oo dhammaystir dimuquraadiyadda”
Baaq (Press Release)
GUDIDDA FURISTA DABARADDA SHARCI EE DHALINYARADDA
“Dhallinta ka qayb-gelli taladda oo dhammaystir Dimuquraadiyadda”
Waxaanu nahay ergo ka wakiil dhammaan dhallinyarada reer Somaliland ee ku kala nool gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaanu ka wakiil nahay hoggaamiyayaaashii maanta, Waxaanu ka wakiil nahay jiilkii berrito iyo waaxda ugu ballaadhan bulshadda reer Somaliland oo ah dhallinyarada.
Haddaba, waxaanu ugu horrayn halkan ka soo gudbinaynaa farriinta & nuxurka shirkan jaraa’id ee aanu maanta iskugu kiin yeedhnay;
“Anagoo ku hadlayna magaca dhallinyarada Somalilandwaxaanu ugu baaqaynaa Golaha Wakiillada JSL guud ahaan, gaar ahaan ahaanna xil-dhibaannadda sharafta mudan ee golahaasi qaran xubnaha ka ah inay furaaan qoddobadda dabarka ku ah in dhallinyaradu ka qayb-galaan golaayasha aayo-ka-talinta ummadda , gaar haan golaaysaha degaanka, Wakiiladda iyo guurtida. Si gaar ah waxaanu farta ugu fiiqayna qodobbada ku jira Xeer Lambar 20-2/20 05 oo dhawaan wax-ka-beddel lagu samayn doono. Qodobka 33.4 ayaa ee xeerkan ayaa sheegaya in mudaha golaha deegaanka ka mid noqonaya ugu yaraan da’diisu ama da’deedu noqoto 35 Jir kaas oo dabraya awooddii maskaxeed iyo muruqeed ee dhallinyarada Somaliland ugu hagar-bixi lahaayeen dalkood iyo dadkooda. Waxaa kale oo qodobkani xanibaad ku yahay dhammyastirka hanaanka dimuquraadiyadda ee waddanka ka socda maa daama uu takooray ka qayb-galka talada qayb ballaadhan oo bulshadda ka ah 70%- waa dhallinyarada.
Haddaba, waxaanu si xushmad iyo sharaf ku dheehan tahay ugu baaqaynayaa Golaha Wakiiladda ee dhawaan ka dooddi dooni xeer lambar 20 inay da’da mudanaha ka qayb-geli kara golaayasha degaanka ugu yaraan ay hoos u dhigaan 10 sannadood (ama 25 jir ka dhigaan).
Guddi ahaan waxaan codsanynaa in M/wayne JSL Mudane Ahmed Silanyo & Xukuumaddiisu ay nagu darraan taageeraddooda niyadeed iyo maamuuseed sidii dhallinyarada loogu soo dabaali lahaa ka qayb-galka hannaanka dib-u-dhiska talada oo ay maanta berri ka yihiin.
Waxaa xusid mudan in distoorka qaranka Somaliland dammaanad- qaaday in muwaaddin kastaa xaq u leeyahay in la doorto iyo inuu wax doorto labaddaba. Sida runta ah maanta dhallinyaradu waa kuwa wax doorta, BALSE LAMA DOORTO IYAGA – taasina ma aha gar & daw midna. Waxaa kale oo damaanad qaaday ka qayb-galka dhallinyarada ee talada xeerarkan iyo qawaanniintan heer caalami iyo heer gobol ee ay ka midka yihiin
 Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqal Insaanka (Bill of Human Rights)
 Baaqa Dhallinyaradda Afrikaanka ee 2006, qodobkiisa 10aad (African Youth
Charter 2006, article 10)
 Baaqa Lisbon Ee Barnaamijyadda iyo Siyaasaddaha Dhallinyaradda (Lisbon
Declaration on Youth Policies & Programmes 1998).
Waxaanu idiinka martinahay in aad noqotaan kuwa run u badala riyooyinka ay qabaan
dhalinta Somaliland oo ah in ay arkaan iyaga oo helay xaqii dastuuriga ahaa
(Constituional Right) oo ah in ay goloyaasha qaranka kamid noqdaan iyaddoo, ka guddi ahaan aanu imika xooga saari doona caqabadha sharci ee heer gole-degaan mar dambena aanu u gudbi doona heerarka baarlamaanka iyo Guurtida oo iyag u ka adag una baahan wax ka bedel distoori ah. “
Waxaa maanta bilaabmi doonna olole aanu ugu magac-darnay “OLOLAHA DHALINYARADDA EE XEER LAMBAR 2O” iyo hayaanka dheer ee aanu ugali doono in aanu helno xaqa distoor ee aanu u leenahay in la doorto waxna doorano kana qaybgalno heerarka kala duwan ee golayaasha qaranka. Gudidan iyo dallada dhalinyarada ee
SONYO oo iyaddu gudanaysa waajibaadka qaran ee dhallin-yarta u hayso guddi ahaana na soo xushay , waxay maamusi doonaan xildhibaanada golaha barlamaanka ee u hiiliya dhallinyarada iyadoo lagu qori doono baal dahab ah loona aqoonsan doono “ Tolka Dhallinyarada”. Dabcan, dhallinyaraduna waa kuwo abaal guda !
Ugu dambaynta waxaanu bahda saxaafadda (oo dhalinyar u badan) , iyo dhalinyar waynaha meel kasta oo ay joogaan dhowraynaa taageeradooda iyo inay garab nagu
siiyaan hawshan isla markaana noogu soo duceeyaan in ALLE (SWT) nagu asturo.
1. Khadar Nur Aw Abdi (Xil. SONYO) ___________________________
2. Saed Mohamed Ahmed (Agaasimaha SONYO) __________________________
3. Farxan Abdi Suleiman (Qoraa & halgamaa/activist) ________________________
4. Mohamed Ahmed Jama (Xubin Bahwaynta Saxaafadda) ____________________
5. Khadar Cabdillahi (Halgamaa dhalinyaradda ah) ______________________
6. Casha Nur Ahmed (Qurbo-joog dhalinyar ah & Aqoonyahanad) _________
7. Maxamed Hassan Dirir (Xubin Siyaasi Dhallinyar ah) ______________________
8. Cabdillahi Hassan Digalle (Xubin USWO ah) _________________________
9. Abwan Hassan Dahir Ismail (Barre & Abwaan) _________________________